Castletown हाउस - IntoKildare
Castletown, आयरल्याण्ड को पहिलो र सबैभन्दा ठूलो Palladian शैली घर को रूप मा, आयरल्याण्ड को वास्तुकला विरासत को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। भव्य भवन मा मार्वल र १ take औं शताब्दी पार्कल्याण्ड अन्वेषण गर्न समय लिनुहोस्।
१1722२२ र c.1729 को बीचमा विलियम कोनोली को लागी, आयरिश हाउस अफ कमन्स का अध्यक्ष, क्यास्टलटाउन हाउस यसको मालिकको शक्ति प्रतिबिम्बित गर्न र ठूलो मात्रामा राजनीतिक मनोरन्जन को लागी एक स्थल को रूप मा सेवा गर्न को लागी डिजाइन गरीएको थियो।
घर को निर्देशित र आत्म निर्देशित पर्यटन उपलब्ध छ र त्यहाँ वर्ष भर परिवार मैत्री घटनाहरु को धेरै छन्।
भर्खरै पुनर्स्थापित अठारहौं शताब्दी डिजाइन पार्कल्याण्ड र नदी पैदल यात्रा वर्ष भर हरेक दिन खुला छन्। त्यहाँ पैदल यात्रा र पार्कल्याण्डहरु को अन्वेषण को लागी कुनै शुल्क छैन। कुकुरहरु स्वागत छ, तर एक नेतृत्व मा राखीनु पर्छ र ताल मा अनुमति छैन, वन्यजीव गुँड छ।
एक स्थानीय रहस्य: Castletown हाउस को जैव विविधता गार्डन बच्चाहरु लाई ल्याउन को लागी सही ठाउँ हो। एक रमाईलो र शैक्षिक परी ट्रेल, खेल क्षेत्र र अन्वेषण गर्न को लागी धेरै संग, यो युवा र यति-युवा आगन्तुकहरुलाई मोहित हुनेछ!
विरासत र इतिहास, आउटडोर, घर र बगैचा, पैदल र पैदल यात्रा, प्रकृति र वन्य जीवन, गर्नको लागि सित्तैंमा, सेलब्रिज
सेलब्रिज, काउन्टी किल्डारे, आयरल्याण्ड.
सोम - सूर्य: 10am देखि 5pm
भ्रमण समय र प्रवेश शुल्क को लागी वेबसाइट हेर्नुहोस्। बहाल १ 18 औं शताब्दी पार्कल्याण्ड्स को लागी नि: शुल्क प्रवेश, बर्ष भर दैनिक खुल्ला।